Amaxwebhu angamaFake-Thenga amaXwebhu kwi-Intanethi | nguyenline.com
Thenga iLayisensi yokuQhuba yeGeneral; Thenga ipasipoti ekwi-Intanethi; Ilayisensi ebhalisiweyo yokushishina; Imali yokubaleka; Izatifikethi zokusweleka kunye nezinye:
Ivenkile yethu yokuThengisa enye ukuze uthenge ilayisensi yokuqhuba ngokuGqibeleleyo, iMali yokuGcina namanye amaXwebhu:
Apha kwindawo yokuchasana, sihlala sinika ilayisensi yokuqhuba ebhalisiweyo, imali yomgunyathi, iipasipoti zentengiso, amakhadi okuhlala abhalisiweyo, izatifikethi zokuzalwa ezibhalisiweyo kunye nezatifikethi zokusweleka. Iinkonzo zethu zezona zikhawulezayo unokufumana kwi-intanethi jikelele. Sinikezela ilayisensi yoqobo yokuqhuba kwiveki enye yokusebenza kwaye siyithumela ngokuthe ngqo kwidilesi yakho yeposi. Saqala ngo-2009 ngokuthengisa iilayisensi zokuqhuba ezingekho mthethweni eYurophu naseMelika. Ukusukela ngoko, umbutho wethu ukhule ukubonelela ngeenkonzo ezingaphezulu kubandakanya namaxwebhu abhalisiweyo kwilizwekazi liphela. Cofa Apha ukufunda okungakumbi ngathi okanye nqakraza Apha uqhagamshelane nathi.
Cofa Apha ukuze ufunde ngakumbi
Umahluko phakathi kwelayisensi yokuqhuba ngokwenene kunye nelayisensi yokuqhuba yomqhubi eyisebenzisa isicelo sepasipoti kunye namanye amaxwebhu.
Ilayisensi yokuqhuba kunye naluphi na uxwebhu oluyithengayo kule webhusayithi, umahluko phakathi kwelayisensi yokuqhuba yokwenyani okanye ilayisensi yokuqhuba yoqobo kunye nelayisensi yokuqhuba inkohliso ikakhulu lubhaliso. Siprinta zonke iilayisensi zethu zokuqhuba kumgangatho ophezulu kakhulu. Nangona kunjalo, sihlala sisenza ubhaliso kuqala kumaxwebhu abhalisiweyo. Inkqubo yobhaliso iyabiza. Imeko yelayisensi yokuqhuba, Ngexesha loBhaliso, Sihlawula amagosa asebenzisana nathi kwisebe lezothutho ukufaka iirekhodi zakho kwindawo yogcino lwedatha. Emva kokuba inkqubo yobhaliso igqityiwe, sinikwa inombolo yelayisensi yokuqhuba esemthethweni ekubhaliseni iphepha-mvume lokuqhuba. Le nkqubo iyafana xa uthenga ipasipoti okanye naluphi na uxwebhu kuthi. Ke, xa wena Qhagamshelana nathi Ukuthenga ilayisensi yokuqhuba yoqobo, chaza ngokucacileyo ukuba uthenga iphepha-mvume lokuqhuba elibhalisiweyo kwaye inkonzo yethu iya kukunika ulwazi oluyimfuneko ngokuxhomekeka kwiLizwe ekulo. Ungacofa nayiphi na kwezi nkonzo zilandelayo ukuze ubone ukuba senza ntoni:Impepha zokuqhuba","Iipaspoti","Ikhadi lokuhlala"Kwaye"Uncedo lweVisa"
Umgaqo-nkqubo wabucala wokuBhaliswa kwelayisensi yokuBhalisa kunye namanye amaxwebhu:
Kubalulekile ukuba uyazi ukuba loluphi ulwazi uvumelekile ukuba ulukhuphe kubathengi bethu abathengi kwaye yintoni ongavumelekanga ukuba uyikhuphe. Qaphela ukuba abathengi bethu abangabakhathaleli kufuneka bacele umfanekiso wekhadi lakho lokundwendwela okanye iinombolo zakho zekhadi letyala. Nangona kunjalo, ukuba uthenga ilayisensi yokuqhuba yasekuqaleni kuthi. Abacebisi bethu ngeenkonzo kufuneka bacele kuwe ulwazi oluyimfuneko lomntu ukubhalisa ilayisensi yakho yokuqhuba. Unokuqiniseka ukuba olu lwazi alungena ezandleni zabantu bangaphandle abangafunekiyo. Ukugcina imfihlo ekuphatheni ulwazi lwakho kukuzinza kweshishini lethu. Unokuqiniseka ukuba ulwazi esilufumana kuwe alupapashwa kwi-Intanethi okanye luvuzisiwe kumaseva ethu akhuselekileyo nangayiphi na indlela. Nje Qhagamshelana nathi kwaye ufumane amaxwebhu akho ngexesha lokurekhoda.
Cofa Apha ukuze uqhagamshelane nathi
Ulawulo loMgangatho weePasi zokuNgena kunye namanye amaXwebhu
Umgangatho weencwadana zethu zokundwendwela zimbali. Xa uthenga i-fake okanye ipasipoti ebhalisiweyo evela kwinkampani yethu, ufumana imeko yoxwebhu lobugcisa. Siphucula abaprinteli bethu rhoqo ukudibana netekhnoloji entsha yencwadana yokundwendwela kunye nezikena zemitha yokulinganisa. Thenga incwadana yokundwendwela ye-EU kuthi kwaye kuya kufuneka ufake ulwazi lwakho kubandakanya iifoto zokuprintwa komnwe ukuze zihambelane netekhnoloji ye-bio metric scan. Kwipasipoti eyinyani, uya kukhululeka ukuba usebenzise igama elitsha. Nangona kunjalo, siya kukucebisa ukuba usebenzise umfanekiso wakho kwiipasipoti ezingezizo ukuze zibonakale ngathi.
Umgangatho wokuprinta iipasipoti eziyinyani nathi ziyasebenza kuwo onke amanye amaxwebhu. Sisoloko kwinkonzo yakho. Cofa apha kwaye ufunde ngakumbi ngeepasipoti zethu.
Gcwalisa isazisi esitsha
Sinikezela ngeephakheji zezazisi ezintsha ngokupheleleyo. Iphakheji yethu yesazisi entsha iya kufuna ukuba: Thenga isatifikethi sokuzalwa, uthenge ikhadi lesazisi elingelolakho, uthenge ipasipoti entsha kunye nelayisensi yokuqhuba ebhalisiweyo. Iindleko zephakheji yethu yesazisi epheleleyo iza ngesaphulelo kuba ukuba namaxwebhu asemthethweni ambalwa kuya kwenza kube lula kwamanye amaxwebhu abhalisiweyo.
Singoochwephesha kwiibill zomgunyathi. Senza ngokukhethekileyo kwi-Euro kunye neebhili zeDollar. Isebe lethu lamanqaku obuqhetseba lishicilela kwaye lisasaze imali ecocekileyo enamanani apheleleyo abhalisiweyo asemthethweni. Siprinta imali kwiipleyiti ezintle kwaye sinceda ngokulinganayo kuthengiselwano lwamanye amazwe kunye ne-SSD. Sinabaxumi rhoqo abathenga imali yomgunyathi kunye nezalathiso.
Cofa apha ukuze ufumane iMali yokulinganisa
Thenga iSiqinisekiso sokuBulala ngokuBulala
Kwilayisensi ye-Counterfeit, sinikezela ngeZatifikethi zokusweleka kubantu abadinga uncedo. Senza le nto ngokungxamisekileyo ukuze isatifikethi sokusweleka singasetyenziselwa ukwenza amabango otshintshiselwano ngebhanki sisizalwane. Isatifikethi sokusweleka luxwebhu olufanayo kwiimeko ezininzi kwaye siza xa kufuneka. Konke okufuneka ukwenze kukunxibelelana nathi ngolwazi olufanelekileyo.
Nxibelelana nathi ngesiqinisekiso sakho sokusweleka
Ilayisensi yoku-odola yaseJamani kwi-Intanethi
I-oda yelayisensi yokuqhuba iAustralia kwi-Intanethi
Ilayisensi yoku-odola yase-UK kwi-Intanethi
Ilayisensi yokuqhuba yase-USA
BUY BANK TO BANK TRANSFER I-100% YOKHUSELEKILEYO NANGEMVA
ikaliwe 3.00 ngaphandle 5
Ilayisensi yokuqhuba yase-Italy
Ilayisensi yokuqhuba yaseFransi
Ilayisensi yokuqhuba yaseKhanada
Wamkelekile kwiLayisensi yeLayisensi ye-Counterfeit kwi-Intanethi. Saziwa kakuhle kwi-Intanethi nakwi-DarkWebs njengeNkampani yoXwebhu yeCustomerfeit. Qhagamshelana nathi Ukuthenga iphepha-mvume lokuGcina namhlanje. (counterfeitlicense1@gmail.com) I-WhatsApp: (+49 1521 4522002)
Thenga ikhadi lesazisi elingelolakho kwi-Intanethi
Thenga izatifikethi zoqobo kwi-Intanethi
Thenga iMithetho ePhakamileyo yeBill kwi-Intanethi
Thenga ilayisensi yokuqhuba yoMqhubi kwi-intanethi
I-Copyright 2020 © nguyenline.com
× Cofa apha usithumelele umyalezo we-WhatsApp